3 Waxyaabood Waa Inaadan Jacayl Dartiis U Sameyn - Aayaha
Home»XIRIIRKA IYO GUURKA»3 Waxyaabood Waa Inaadan Jacayl Dartiis U Sameyn
Xiriirada waxay la yimaadaan culeyskooda. Xiriirka guusha leh wuxuu keenaa guur farxad leh oo aad u macaan.
Marka qof uu xiriir qof kale la yeesho, isaga ama iyada waxay fileysaa in waxyaabaha qaar loo huro ama la joojiyo si xiriirka u shaqeeyo, waa inaad ka taxadartaa inaad burburiso waxyaabaha qiimaha iyo micnaha ugu fadhiya noloshaada.
Waa kuwaan 3 waxyaabood oo ay tahay inaadan magaca jacayl dartiis u sameyn.
Saaxiibada qiimaha ku leh noloshaada waa kuwo aad muhiim u ah waana inaadan isk deyn. Mararka inaad qof jacayl u qaado waxay kaa goyn kartaa saaxiibadaa balse waad u baahantahay saaxiibadaas haddii xiriirka uu shaqeeyo iyo haddii kalaba.
Sababta aad saaxiibadaas iskaga jareyn ama iskaga deyneyn ayaa ah waxay noqon doonaan kuwa ku siiya rajo isla markaana ku taageera.
Qoyska waa kuwo aad muhiim u ah maadaama waalidiintaada iyo wlaalahaa ay kaalin weyn ka qaataan noloshaada.
Hadana waa inaad ilaalisaa xiriirka wanaagsan ee aad laleedahay qoyskaaga xittaa markaad qofaad jeceshahay aad guursato.
Waa inaadan shaqadaada uga tagin magaca jacayl dartiis. Waa wax guud ah in lmaanaha ay shaqada ka tagaan gaar ahaan marka qofka uu jecelyahay weydiisto inuu ka tago.
Mar kasta ma ahan go’aan wanaaagsan inaad shaqadaada qofaad jeceshahay dartiis uga tagto maadaama qofkaas aad isku dhici kartaan oo aad kala tagi kartaan, haddii ay dhacdo taas waxaad noqoneysaa shaqo la’aan adigoo lamaanahaagina waayay.